I-Web Scraping Tutorial Kusuka Uchwepheshe We-Semalt Kubasebenzisi Abangewona Ochwepheshe
Namuhla, i-intanethi ibe umthombo owodwa lapho iningi labaphathi kanye newebhu abaseshayo babheka idatha abayidingayo. Iwebhu iyisiteji esikhulu, futhi abantu badinga ukusebenzisa amathuluzi afanele ukukhipha yonke imininingwane abayifunayo. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukwazi ukwazisa indlela yokulandelela phansi i-dataset efanele. Isibonelo, bangase bafune ukukhipha isitatimende sedatha yezinsimbi futhi bakwazi ukuhlaziya imiphumela kamuva.
Noma kunjalo, okokuqala, abasebenzisi kudingeka bazi ukuthi baqale kanjani ngamaphrojekthi abo. Uma befisa, bangakwazi ukukhipha isitatimende sedatha yezinsimbi kusuka kuwebhusayithi usebenzisa i-Python - web hosting asp sql server.
I-Web Scraping: Ithuluzi Lokususa Lokusebenza Eliphumelelayo
I-Web Scraping ingasiza abaseshi bewebhu ukuthola ngokuzenzakalelayo idatha emakhasini ahlukahlukene ewebhu ngaphesheya kwenetha. Ithuluzi eliphumelela kakhulu elikwazi ukunikeza imiphumela ethize ngaphakathi kwamaminithi. Namuhla, abaphathi abaningi abathengisa basebenzisa leli thuluzi ukuze bakhiphe amanani, uhlu lwemikhiqizo nokuningi. Isibonelo, abasebenzisi bangakwazi ukukhokha web scraper ukuze babanike uhlu lwemikhiqizo abayithandayo, kanye nesilinganiso sabo kusuka kuwebhusayithi ye-e-shop. Empeleni, ukushaya iwebhusayithi kuyindlela ephumelelayo yokuqoqa noma iyiphi idatha oyidingayo futhi uthuthukise ikhwalithi yemikhiqizo noma amasevisi anikezwayo.
I-Bit Of Planning
Abaseshi bewebhu abafuna ukwakha imicikilisho yomuntu oyisisindo abayisebenzisayo kufanele benze izinhlelo zabo siqu. Okokuqala, badinga ukunquma ukuthi yiluphi uhlobo lwolwazi abafuna ukubutha kulokhu noma kulewebhusayithi. Isibonelo, bangase bafune ukukhipha amakhasi aqukethe ulwazi mayelana nezinsimbi zobhiya. Futhi lokhu akuyona inkinga enkulu njengoba kunamakhasi amaningi ewebhu anikezela lolu lwazi.
Hlola ikhodi ye-HTML
Uma befuna ukuthi abakwa-scraper bafumane lonke ulwazi mayelana nezinsimbi zobhiya, kudingeka babheke ikhodi ekhethekile (HTML) yezinsimbi zobhiya Iwebhusayithi. Kudingeka bakhumbule ukuthi iziphequluli eziningi zewebhu zinikeza indlela yokuthola ikhodi yomthombo we-HTML ngokuchofoza nje. Isibonelo, ku-Google Chrome, ukusesha ngewebhu kungakwesokudla ukuchofoza kwisici kwenye iwebhusayithi ethile bese uchofoze 'Hlola,' ukuze ubone ikhodi ye-HTML.
Beer & Breweries Ulwazi
I-Breweries database ilula kakhulu ukudala. Abaseshi bewebhu kufanele bakhethe wonke amakholomu afanele kudathasethi, asuse noma yiziphi izimpendulo bese uyisetha kabusha. Ngokusetha kabusha i-index, yakha isikhombisi esikhethekile se-brewery ngayinye. Bayodinga lesi sikhombisi uma bedala idasethi yezinyosi ngoba ngale ndlela banethuba lokuhlanganisa ubhiya ngalunye nge-id ye-brewery ethize. Futhi, bangenza i-dasaset yezinyosi bese befaka yonke idatha ephindaphindayo mayelana ne-breweries, njengamagama nezindawo. Bese-ke bangakwazi ukufanisa ukuphuza okunezinhlobo ezithile zobhiya.
Sebenzisa izinto eziguquguqukayo, njengoMasipala noHulumeni
Ngokusebenzisa i-dataset yezokwelapha, bangenza amakholomu ezindaweni zokubheja, njengomuzi kanye nombuso lapho isiphuzo ngasinye sitholakala khona. Bangakwazi ukuhlukanisa lezi zinguquko ezimbili ngokusebenzisa umsebenzi wokuhlukaniswa.